विकृतितर्फको हाम्रो यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार
विकृतितर्फको हाम्रो यात्रा
श्रावण १०, २०७४ सुजीव शाक्य
कोलकातामा ८० को दशकमा कलेज पढ्दा, बर्खायाममा बेस्सरी पानी पर्दा कलेज बन्द हुन्थ्यो। यातायात ठप्प हुन्थ्यो, सडक पार गर्नलाई मानिसले दौडाउने रिक्सामा धेरै पैसा दिएर सडक पार गर्नुपर्थ्यो ।
सडकमा राखेका ‘म्यानहोल’का ढक्कन खोलेकाले कति त्यहीँ खसेर मर्थे। बिजुलीका तार पानीमा खसेर करेन्ट लागेर मर्ने र घाइते हुनेहरूको अस्पतालमा घुइँचो हुन्थ्यो। मलमूत्र पानीमा मिसिन्थ्यो। पानीमा फोहोर तैरिरहेको देखेर घिन लागेर बान्ता गथ्र्यौँ। घरमा सिधै बाथरुममा गएर डेटोलले नुहाउने गर्थ्यौं, फोहोरको सम्झनाले खाना खान सकिँदैन थियो। कस्तो पिछडिएको समाज भनी सोच्दै भोकै सुत्ने गर्थेँ। यो सँगै एउटा ठूलो प्रार्थना पनि गर्थें, काठमाडौँ कहिल्यै त्यस्तो नहोस्।
काठमाडौंको त्यो बखतको सम्झना धेरै मिठो छ। कोलकाताको फोहोर र गर्मीलाई छाडी बिदामा आइन्थ्यो। एयर कन्डिसन सहर। हरियालीले ढाकेको। स्वयम्भूबाट ठूलो नगरी हेरिन्थ्यो। तर आजको कंक्रिट जंगल होइन, हरियाली हेरिन्थ्यो। साझा बसले चलाउने निलो मित्शुबिशी बसमा चड्दा, कोलकाताको थोत्रा बसहरू बदलेर किन यस्तो बनाउन नसकिने भनी सोच्थेँ। ट्रली बसमा भक्तपुर जाने र फर्कने बिदाको एउटा ठूलो रहर हुन्थ्यो, जो निसदिन पूरा गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। प्लास्टिकको बिगबिगी सुरु भर्खर हुँदै थियो।
त्यसर्थ त्यति सहर फोहोर देखिन्न थियो। भित्री पाटनतिर उब्रेको खाना त्यपस्मा राखेर रक्सी बनाउने चलन थियो। सिमेन्ट, छड र गिट्टीको थुप्रोले हिँड्ने बाटो छेकिने कमै हुन्थ्यो। बाइक र ‘होन्डा’ पर्यायवाची शब्द थिए र कम थिए। चिनियाँहरूले रिङरोड बनाउने बेला, २५ वर्ष पछिको ट्राफिकको चापलाई मनन गरेर बनाएको भन्थे। विशाल बजार, एसियाको राम्रो बजारहरूमध्ये गनिन्थ्यो। कोलकाता जाँदा विशाल बजारको ध्वाँस दिन्थेँ। कोलकातामा त्यस्तो बजार कहिले बन्छ भनेर फुर्ती लगाएर सोध्थेँ।
स्वनिग:को अस्तित्व खोज्दै
स्वनिग: अर्थात् उपत्यकाका तीन सहरमा अहिले आउने खबर मेरा कोलकाताका दिनहरूभन्दा धेरै फरक छैन। पानी पर्‍यो कि सडक खोला हुने र पानीका पाइपमा ढलबाट निस्कने मलमूत्रको संगमले जीवन चौपट बनाउने। तीन सय मिटरभन्दा बढी नखनेको वा खाल्डो नभएको सडक पाउन गाह्रो भइसक्यो। स्वनिग: अब आफूलाई, भारतका हामीले छि:छि: र दुरदुर गर्ने सहरझैँ बनाउन सफल भयौं र हामीले काठमाडौं उपत्यकाको नक्कल गर्न नेपालका सबै सहरलाई बाध्य गरायौँ। जसरी भारतका पहाडमा भएका सहरहरूले ‘सिमेन्टको ढिक्का’ बनेर आफ्ना अस्तित्व गुमाए, हामीले पनि त्यही गर्‍यौं। काठमाडौँको बढेका बस्तीहरूमा जाँदा र कति भाग पुग्दा, आफूलाई फार्बिसगन्जको मन नपर्ने भाग अथवा भारतका आफूलाई जबर्जस्ती गएको र एकदम मन नपरेको दृश्यहरू सबै ताजा बनाइदिन्छ। मनमा आउने शब्दहरू त्यही नै छन्– फोहोर, असभ्य, स्वार्थी इत्यादि।
काठमाडौँमा ती भागबाट टुँडिखेलतिर बरालिँदा सेनाले प्लटिङमात्र गर्न बाँकी बीच सहरको ‘आर्मी भिलेज’मा एकछिन घोरिन बाध्य बनाउँछ। भद्रकालीदेखि सिंहदरबारको बाटोमा पनि अब पसल आउने भयो, बाटो छेउको फुटपाथमा कब्जा गरेको भन्न मिल्दैन, त्यो त समानुपातिक विकासको निम्ति र आर्थिक समानताको निम्ति आवश्यक। पाटनढोकाबाट मेरो घर जाने बाटोतिर जाने सडक र फुटपाथ दुवै व्यवसायीहरूले कब्जा गरेका छन् र विरोध गर्‍यो भने ‘सामन्ती’को तक्मा पाउने गरिया’छ। फुटपाथ कब्जाको विरोधमा ट्विट गर्दा निलो नम्बर प्लेट चढ्ने केहीले पनि सामन्तीको उपाधि दिए। सडकको छेउमा रोपेका रुखहरू हेर्छु र उद्घाटन हुँदा नेता, व्यवसायी, कार्टेलहरूका अग्रजका तस्बीरहरू, आँखासामु आउँछ। तर ती बिरुवाहरू किन रुखमा परिणत हुँदैनन्? कम्पनीको, बैंकहरूको नामले सुसज्जित घेराहरूका बीचमा किन यी बिरुवाहरू लाचार? एउटा साथीले मलाई, नेपालमा हुने वृक्षरोपणमा ‘बोन्साई’ रुखमात्र रोप्छन्। तसर्थ मानिसको कदभन्दा कहिल्यै बढ्दैन रे भन्थे। यी बिभिन्न कुरा मनमा घोलिने गर्छ।
नेपाली समाजको दशा
मेरो कोलकाताका संस्मरण ३० वर्षपछि ब्युँतिँदा मलाई यसको जिम्मेवार को त भनी मनन गर्न त अवश्य नै मन लाग्छ। नेपाली समाजमा गरिबी घटेर, प्रचुर मात्रामा धनको सिर्जना भए पनि शिक्षाको पहुँच र डिग्रीवालहरूको वृद्धि भए पनि संसार घुमेर, बसेर र बुझेर आउनेहरूको संख्या बढे पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट घरमा नै संसार पुगे पनि किन यो दशा? सायद हामीले राजनीतिक अस्थिरतामा हाम्रो स्वार्थ खोज्नमा नै अल्झेनौं त? राजनीति र राजनीतिक नेता भनेको समाजको प्रतिविम्ब हो। यो फरक कहिले हुन सकेन। कतै हामीले रातो मोसो, फूलमाला र खादा कोठेलीको लोभमा समाजलाई अर्कोतिर त धकेलेनौं?
क्याम्पसमा युवानेता हुँदा, फुटपाथ ओगटेर बाइक पार्क गरेर खाजा खाने ठाउँको मानिसलाई ‘कसैले केही गर्न खोज्यो भने मलाई भन्नु’ भनेर त्रास फैलाएर पछि नेता हुँदा, त्यही स्कुल र क्याम्पसको जग्गा लिजमा मिलाएर, नियम सबै मिचेर वरिपरिको सबैलाई थर्काएर करोडौंमा खेल्न थाल्छन्। जग्गाको भाउ अकासिन थालेपछि नेताको सम्पत्ति पनि बढ्न थाले। पार्टी प्यालेसको व्यवसायमा ठूलादेखि साना नेताहरूको नाम जोडेको पाइन्छ। सरकारी संस्थानका जग्गा प्रत्येक पार्टी गठबन्धनसंँगै नयाँ–नयाँ व्यापारीहरूले हात पारेको सुनिन्छ। राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटसंँग मिलेर काम गर्न जान्यो भने पुख्र्यौली जग्गा, गुठीको जग्गा, खोलाको जग्गा सबैबाट लाभ लिन सकिन्छ। तसर्थ त्यो रातो मोसोको मूल्य बढेको होला। नगरपालिकाको चुनावमा जित्नेहरूलाई अनुहार नै नचिन्ने गरिकन रातो मोसो दलेर, मालाको फाँसी लगाउने अधिकांशमा त्यो कुनै नयाँ सेटिङको आसमा बढी नै भएको त होइन?
जग्गाको अकासिँदो भाउ र राजनीतिले प्रतिविम्ब गरेको समाजमा आएको विकृतिले सामाजिक मूल्य–मान्यता सबैमाथि प्रश्नचिन्ह उठाएको छ। पाटनमा भोजमा जाँदाको सुनिने कुरामध्ये आफ्नो पुर्खाले मन्दिर, स्कुल र अन्य सामाजिक प्रयोजननिम्ति दान दिएको घरजग्गा अहिलेको पुस्ताले धमाधम मुद्दा नै लडेर आफ्नो बनाउँदैछ। समाजमा सुसम्पन्न भए पनि दान दिने परोपकार गर्ने परम्परामा ह्रास भएको छ। आडम्बरको प्रतिस्पर्धामा समाजमा धेरै विकृति भित्रिसके। व्रत बस्ने, त्याग र तपस्याको परीक्षाको रूपमा मानिने साउन महिनालाई वर्षको सबभन्दा महँगो बनाइसक्यौं। झन् फेसबुकमा लुगा त्यही नै लगाएको देखिने नभएपछि झन् बढी खर्च गर्न दबाब बढ्यो।
राजनीतिक नेता भएपछि सामाजिक रूपमा अग्रजको रूपमा ‘देखिने’ सबै कुरा पाउने भएर होला। रातो मोसो र मालाको झुप्पाको विरोध नभएको र कसैले पनि घोषणा गरेर परिवर्तन गर्न नखोजेको किन? सुरक्षाको डर नभएको बेला, नियम मिचेर मन्त्रीका गाडीहरू दौडाउने गर्छन्। भाषण दिँदा कसको डरले हो कुन्नि गार्डलाई पछाडि उभ्याउने गर्छन्। ग्यास्ट्रिक भयो कि मुटुको बिमारीको पैसा राजस्वसंँग धुत्न खोज्छन्। विदेश भ्रमणको निम्ति अनेकौं रणनीति बनाउने गर्छौं।
समाज ब्यस्त छ, आफ्नो भविष्य उज्यालो बनाउन। यस्तो समाजले धेरै प्रश्न अघि सार्छ। कसरी गर्ने त फोहोर व्यवस्थापन? कसरी खुला ठाउँहरू जोगाउने? कसरी गर्ने कानुनको कार्यान्वयन जहाँ खाल्डो खनेर नपुर्नेलाई कारबाही होस्। जहाँ २१ औं शताब्दीका सामान, बुद्धि, प्रक्रिया र काम गर्ने मानिस भए पनि, १९ औं शताब्दीको जस्तो काम गर्ने गर्छन्। जहाँ खाली ठाउँ भयो कि बिभिन्न तौरतरिका चलाएर त्यो खाली ठाउँमा घिनलाग्दो प्रारूप ठड्याउँछन्।
जहाँ केसका केस थपेर, न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा नै आमूल परिवर्तन गरी न्यायमा नै प्रश्नचिन्ह लगाइन्छ। समाज परिवर्तनशील हुन्छ, तर त्यो परिवर्तन सकारात्मक हुनुपर्छ। सबै परिवर्तन सानो–सानो पाइलाबाट सुरु हुन्छ। सुरुवात यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ– स्वेच्छाले रातो मोसो र मालाको झुप्पाको त्यागबाट सुरु गर्न सकिन्छ कि? त्यसपछि अरू त्याग हुनसक्छ कि?
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७४ ०८:१२
असार १०, २०७४ सुजीव शाक्य
दस वर्ष पहिले प्रशान्त तामाङले इन्डियन आइडल जितेर दार्जिलिङ क्षेत्रमा अर्को राजनीतिक आयाम सुरु भयो । प्रशान्तलाई जिताउन लागेका विमल गुरुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी खोलेर गोर्खा राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाका सुभास घिसिङझैं पहाडको राजनीतिमा होमिए ।
विकास भनेको आफू, आफ्नो पार्टी र समर्थकको निजी आर्थिक विकासमा विश्वास राख्ने मनसाय देखिँदै गयो । पैसा सिद्धिन्न थाल्यो कि गोर्खाल्यान्डको नारा लिएर आउँछन् भनेर धेरैले भन्न थाले । दार्जिलिङ जिल्ला र अब भर्खरै घोषणा गरेको कालिम्पोङ जिल्लाका केही गर्न जाँगर भएका युवा पिढी मुम्बई, बंगलौर र दिल्लीतिर लागे । राजनीतिक पोषणमा हुर्केकाहरूसँग उनीहरू बाझ्न चाहेनन् । विदेशतिर लाग्नु नै भविष्यको निम्ति राम्रो मान्न थाले । राम्रा–राम्रा विद्यालयहरू भएकाले बाह्र कक्षासम्म पढ्ने र त्यसपछि कलेजसँगै जीवन पनि बाहिर नै । अवकाश प्राप्त भएकाहरू नाति–नातिनी हुर्काउन बसे । युवाहरू नभएपछि तराई भूमिबाट काम गर्न आउनेहरू बढ्न थाले । सानो ठाउँ सानो रहन सकेन, बढ्दै गयो, तर सहर पनि बन्न सकेन । एकार्कामा दूरी पनि बढ्यो, तर ठूलो सहरझैं आर्थिक रूपले परिवर्तन भएर युवा पिढीलाई पनि समेट्न सकेन । मानिसहरू दिक्क भए, तर जीवन चली पनि रह्यो ।
प्रकाशित : असार १०, २०७४ ०८:३८